डाक्टर साथी_नेपाल मेडिकल भोलिन्टियर सोसाइटी : 96. WHO-Sixty-sixth World Health Assembly (विश्व स्वास्थ्य संगठनको वार्षिक स्वास्थ्य भेला र छलफल)
96. WHO-Sixty-sixth World Health Assembly (विश्व स्वास्थ्य संगठनको वार्षिक स्वास्थ्य भेला र छलफल)
विश्वको स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात् डब्लुएचओले अग्रणी भूमिका खेल्दछ । अहिले यस संगठनले आप्mनो ६६ औं वार्षिक भेला आयोजना गरिरहेको छ । यही मे २० देखि मे २८ तारिकसम्म यो भेला आयोजना गरिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरु यो भेलामा सहभागी भइरहेका छन् । झण्डै तीन हजार जना यसमा सहभागी छन् । यो यस्तो विशेष भेला हो, जसबाट विभिन्न नीति–नियमहरु बनाउने, परिमार्जन गर्ने,
हटाउने, आर्थिक एजेण्डाहरुमा छलफल गर्ने, नयाँ महानिर्देशक आदि छान्ने काम गरिन्छ । प्रत्येक वर्ष यो भेला स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा हुने गर्दछ । नेपाल पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको सक्रिय सदस्य राष्ट्र हो । नेपालबाट वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री विद्याधर मल्लिक, स्वास्थ्य सचिव डा प्रवीण मिश्र लगायत अरु अधिकारीहरु सहभागी छन् । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य यही सन् २०१५ को अन्त्यमा सकिँदैछ । जसले गर्दा पनि यो भेला विगतका भेलाभन्दा बढी नै चासोको विषय बनेको छ । यस सभामा यसपल्ट उठाइएका प्रमुख स्वास्थ्य मुद्दाहरु दीर्घकालीन असर पार्ने खालका छन् । दीर्घ रोगहरुः जस्तो मधुमेह, मुटुको रोगहरु, अर्बुद रोग फोक्सोमा हुने दीर्घ रोगहरु जुन नसर्ने प्रकृतिका.............